Nuxurka heshiis laba geesood ah oo ay dawladaha Masar iyo Somaliland maanta kala sexeexdeen | Berberanews.com
Home WARARKA Nuxurka heshiis laba geesood ah oo ay dawladaha Masar iyo Somaliland maanta...
Nuxurka heshiis laba geesood ah oo ay dawladaha Masar iyo Somaliland maanta kala sexeexdeen
Hargeysa-(Berberanews):- Dawladaha Masar iyo Somaliland, ayaa maanta magaalada Hargeysa ee Caasimadda dalka ku kala sexeexday heshiis laba geesood ah oo dib loogu dhisayo Magtabad ay Masar ku lahayd Hargeysa oo muddo 20 sano ku siman bur-bursanayd.
Wefti ka socday dawladda Masar oo uu hoggaaminayo la-Taliyaha Safiirka Masar u fadhiya dalka Jabuuti Maxamed Binuu Marwaan, ayaa maanta safar ku yimi magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland.
Weftigan ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa, waxay u soo gudbeen dhinaca gudah magaalada, isla markaana waxay kulan la yeesheen Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar, oo sheegay inay waxyaabo badan ka wadahadleen Weftiga Masar.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Cabdillaahi iyo hoggaamiyaha Weftiga dawladda Masar Maxamed Binu Marwaan oo si wada-jir ah shir jaraa’id ugu qabtay galabta xarunta Wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland ee magaalada Hargeysa, ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wadahadleen iyo ujeeddada Weftiga Masar Hargeysa u yimi.
“Masar waa dal aynu walaalo nahay oo muddo dheerna dalkan Somaliland uu xidhiidh aad u dheeri ka dhaxeeyay oo la xidhiidha dhinacyada dhaqanka iyo waxbarashada .” sidaa ayuu yidhi Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar, waxaanu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay safarka Weftigan Masar ka socdaa Hargeysa ku yimi, isaga oo xusay inuu si farxadi ku lammaan tahay Somaliland ugu soo dhawaynayo Weftigan.
“Waxaan aad ugu faraxsan nahay xidhiidhka immika ka dhaxeeya Somaliland iyo Masar xoogaystay ka dib markii dawladaha Masar iyo Somaliland wadahadallo toos ahi dhex mareen.” Ayuu yidhi Wasiir Maxamed Cabdillaahi, waxaanu intaa ku sii daray; “Waxaan uga mahad celinayaa socdaalkii aannu ku tagnay dalkaasi Masar oo aanu la kulanay masuuliyiin badan oo ay ka mid yihiin Wasaaradda arrimaha dibedda iyo Wasiirro kale, waxaana nuxurkii aanu kulamadayadii waxay ahaayeen in labada dal wada yeeshaan xidhiidh aad u adag.”
Wasiirku mar uu ka hadlayey ujeeddada Weftiga waxa uu yidhi; “Waxaanu halkan u fadhinaa Wefti Masar uga yimi sidii xidhiidhkaasi loo hirgelin lahaa oo ay ka mid tahay in dawladda Masar ay dhisto Maktabad lagu barto dhaqanka Carabta iyo Luuqadda Carabiga oo ay hore dawladda Masar Hargeysa ugu lahayd.” “Taasi waa guul weyn oo aanu uga mahad naqayno dawlada Masaaridda gaar ahaan safaaradaha dalkaasi ee Jabuuti iyo Nairobi.”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibaddu.
Wasiirku wuxuu sheegay inay koox Dhakhaatiir ah oo ka socota dalka Masar ay adeeg caafimaad ka fuliyeen Hargeysa, waxa kale oo uu xusay inay deeqo waxbarasho oo heer jaamacadeed ah ay Masar siin doonto ardayda reer Somaliland.
Md. Maxamed Cabdilaahi waxa uu sheegay inay ka wada hadli doonaan Weftiga Masar iskaashiyo kala duwan oo ku wajahan dhinacyada Ganacsiga iyo xoolaha ah. Waxaanu yidhi; “Waanu soo dhawaynaynaa xidhiidhka aanu la leenahay dalka Masar, waxaana aanu dhawaan shirkii midowga afrika isku aragnay mar kale Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi oo aanu halkaasi ka sii ambo qaadnay xidhiidhka labada dal.”
Geesta kale, La-taliyaha Safiirka Masar u qaabbilsan waddanka Jabuuti Maxamed Binu Marwaan oo ka hadlay dhiniciisa shirkaa jaraa’id ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay socdaalkiisa Somaliland. Maxamed Binu Marwaan waxa uu sheegay in xidhiidhka labada dal uu isa soo tarayo. Waxaanu tilmaamay inay iska kaashan doonaan dhinacyada Waxbarashada, Ganacsiga iyo arrimo kale.
La-taliyaha Safiirka Masar u fadhiya Jabuuti Maxamed Binu Marwan, waxa uu sheegay inay hadda u socdaan dhismaha maktabadda weyn oo ay ka dhisayaan magaalada Hargeysa.
Gebo-gabadii, waxa kulankaasi Weftiga Masar iyo Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland ku kala sexeexdeen heshiisk dhismaha Maktabad dawladda Masar ku lahayd Hargeysa oo hadda dunsan, balse si dhakhso ah loo bilaabayo dhismeheeda sida ay Masuuliyiinta labada dal warbaahinta u sheegeen.
Waa markii ugu horreysay ee ay dawladaha Somaliland iyo Masar si rasmiya u kala saxeexdaan heshiiskan oo kale 20-kii sannadood ee ay Somaliland gooni uga taagnayd dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya.
Waa marki ugu horreysay ee muddo labaatan sano ka badan ay dawladaha Masar iyo Somaliland heshiis noocan oo kale ah wada saxeexdaan, waxaana dhawaanahan sii xoogaysanaya xidhiidhka u dhexeeya Somaliland iyo Masar.
Previous articleFadhigii golaha Guurtida ee Maanta oo Buuq iyo Sawaxan ku furmay kuna xidhmay iyo sababta keentay
Next articleMadaxweyne Siilaanyo oo xilka ka qaaday laba Masuul oo mid ka midi hore isu-casilay